DVDStyler: Fampiharana maimaim-poana sy miampita sehatra amin'ny famoronana sy fanoratana DVD | Avy amin'ny Linux
Na inona na inona Operating System andao hampiasa, isika rehetra dia naniry tamin'ny fotoana sasany mamorona DVD mijery matihanina, izany hoe miaraka amin'ny fonony sy menio, ankoatry ny singa sy / na fotodrafitrasa hafa. Noho izany, amin'ity indray mitoraka ity dia hodinihintsika izao DVDStyler.
DVDStyler dia fangatahana maimaimpoana sy multiplatform ho an'ny Famoronana DVD sy fanoratana. Izay mamela antsika hamorona DVD mora amin'izany fijery matihanina ilaina izany matetika.
DVDStyler dia fampiharana izay ajanona ny fivoarany, izany hoe kinova farany farany dia navoaka tamin'ny 19 / 05 / 2019. Saingy mbola kinova miovaova izy io, matotra (mahomby / mahomby) ary azo jerena ao amin'ny ankamaroan'ny repositories an'ny GNU / Distros Linux. Izay no antony tsy hamoahana azy ho fampiharana ilaina ho an'ny rehetra.
Ohatra iray hafa amin'ny fampiharana azo antoka nefa taloha izay mbola mifanaraka amin'ny filàna DVDisaster, izay noresahinay teo aloha, taona maro lasa izay. Noho izany dia manasa ireo liana izahay hijery ny famoahana anay teo aloha mifandraika amin'izany DVDisaster na mandehana mivantana amin'ny rohy tranokalano ao amin'ny Sourceforge, izay mbola misy.
"DVDisaster dia fitaovana natao hamerenana ny angona avy amin'ny kapila optika, na CD, DVD na Blu-Rays. Tsy mamela antsika hitady vaovao fotsiny izany, fa afaka manamarina ihany koa ny toetran'ireo kapila, miaraka amin'ny sary mampiseho ny mombamomba azy ireo." Avereno angona avy amin'ny CD na DVD anao amin'ny Dvdisaster
Avereno angona avy amin'ny CD na DVD anao amin'ny Dvdisaster
1 DVDStyler: fampiharana maimaimpoana sy multiplatform
1.1 Inona no atao hoe DVDStyler?
1.2 Fampahalalana mifandraika amin'izany
DVDStyler: fampiharana maimaimpoana sy multiplatform
Inona no atao hoe DVDStyler?
"DVDStyler dia rindrambaiko mpanoratra mpanoratra DVD maimaimpoana maimaimpoana izay ahafahan'ny mpankafy horonantsary mamorona DVD mijery matihanina. Izy io dia rindrambaiko maimaim-poana zaraina eo ambanin'ny GNU General Public Licence (GPL)."
Noho izany, miaraka amin'ny DVDStyler afaka amin'ny tsotsotra isika mandoro raki-tsary ho DVD ho an'ny playback mora sy haingana amin'ny mpilalao DVD rehetra mamorona menus DVD fanao amin'ny tsirinay ary mila mitantana ny atiny voarakitra.
Fampahalalana mifandraika amin'izany
Mora ampiasaina izy io ary miaraka amin'ny fitaovana tsotra sy fiasa mandroso.
Azo ampiasaina izy io hamoronana sy handoroana horonan-tsary amin'ny DVD miaraka amin'ny menio fifandraisana manokana.
Mamela ny famoronana ny menus preview DVD, bokotra ary fiasa. Ho fanampin'izany, ahafahanao manamboatra ny fivezivezena sy ny fanamafisana ny bokotra na zavatra sary natsofoka tao anaty menus noforonina.
Izy io dia manohana saika ny kaody horonan-tsary sy feo lehibe rehetra hamoronana sy firaketana izay rakitra. Manokana izany dia mifanaraka amin'ny endrika AVI, MOV, MP4, MPEG, OGG, WMV, ankoatry ny hafa. Izy io koa dia manolotra fanampiana ho an'ny AC-3, DivX, Xvid, MP2, MP3, MPEG-2, MPEG-4, ankoatry ny feo sy horonan-tsary hafa.
Izy io dia manana ny fanohanan'ireo mpikirakira multicore. Ankoatr'izay, voasoratra amin'ny C / C ++ izy ary mampiasa ny toolkitary sary wxWidgets izay mahatonga azy io tsy miankina mahaleo tena. Ny antony, multiplatform (GNU / Linux, Microsoft Windows ary MacOS) izy io.
Raha mila fanazavana fanampiny, azonao atao ny miditra amin'ny tranonkala ofisialin'ny DVDStyler en Sourceforge. Na dia mianatra manokana ny fampiasana azy aza ianao dia afaka miditra amin'ilay fampianarana ofisialy amin'ny teny espaniola fipihana ny manaraka rohy.
Ny rindranasa malalaka sy misokatra sasany mitovy amin'izany dia mety:
Sokafy ny mpamokatra DVD
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «DVDStyler», fampiharana maimaimpoana sy marolafy maimaimpoana ary mbola misy ankehitriny ampiasaina hitantanana ny famoronana sy ny fanoratana ny DVD-nay; dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » DVDStyler: fampiharana maimaimpoana sy multiplatform ho an'ny famoronana sy fanoratana DVD
eJoagoz dia hoy izy:
Tena tsara izany. Taona vitsivitsy lasa izay dia mety ho tsara ho ahy izany, saingy androany tsy dia firaketana firy amin'ny DVD / Blu-Ray aho. Mbola harahi-maso hatrany izany. Misaotra tamin'ny lahatsoratra sy ny tolo-kevitra.
Valio i eJoagoz
willalfangom dia hoy izy:
Eny, tsy ilaina ny manoratra anaty CD / DVD / BluRay, satria ity rindrambaiko ity dia manana safidy hitahiry izay efa vita tamin'ny endrika .iso; ity no andefasako ny mpanjifako rehefa mandefa ahy izy ireo hanao asa mandanjalanja sary sy horonan-tsary hahafahana mahita azy ireo amin'ny solosain-dry zareo (ary teo aloha tamin'ny mpilalao DVD).
Mamaly an'i willalfangom
Miarahaba anao, willalfangom. Misaotra anao tamin'ny hevitrao sy ny fandraisanao anjara tamin'ity lohahevitra ity.
Miarahaba anao, eJoagoz. Misaotra anao tamin'ny hevitrao ary faly izahay fa tianao ilay rindran-damina.
Ny fanafihana fiankinan-doha dia mamela ny famonoana kaody ao amin'ny PayPal, Microsoft, Apple, Netflix, Uber ary orinasa 30 hafa